Android Oreo: aha ya kwadoro ma ndị a bụ isi akụkọ ya | Akụkọ akụrụngwa
Anyị agwaworị gị ụbọchị ole na ole gara aga: tinyere ụnyaahụ anyanwụ, Google kpebiri iweta ụdị gam akporo ya kachasị ọhụrụ. Ọ nọgidere na-akwado ihe ga-abụ aha a họọrọ maka gam akporo 8.0. Ma ọ bụ ezie na ọ bụ ihe nzuzo nwere olu, anyị nwere ike ịnwe nkwenye na aha nke ụdị ugbu a na-enweta bụ Android Oreo.
Ugbu a, ọ bụghị naanị na nomenclature nke nsụgharị ahụ bụ ihe aghụghọ, mana ihe nyiwe gam akporo ga-enye anyị ọzọ yana akụkọ ga-enweta ugbu a njedebe nke sistemụ arụmọrụ Google. Ọzọkwa, nke a ga - emekwa ka anyị mata ihe ndị otu na - esote ga - enye anyị -nke ukwuu smartphones dị ka mbadamba- ka emee ya n'ahịa. Ya mere, ka anyị nyochaa isi akụkọ ị nwere ike ịchọta na gam akporo Oreo.
1 Android Oreo ga-abụ ọsọ ọsọ dị ka gam akporo Nougat
2 Foto dị na foto, 'ngwa' abụọ na ihuenyo ahụ n'otu oge
3 Autocomplete na-abịa gam akporo Oreo
4 Ihe ngosi na ngwa
5 Ngwa ngwa gam akporo ngwa - Gbanye nrụnye
6 Emojis ọhụrụ (60 ga-abụ eziokwu)
7 More batrị na ndị ọzọ nche na gam akporo Oreo
8 Ngwa ngwa site na ụdị a
Android Oreo ga-abụ ọsọ ọsọ dị ka gam akporo Nougat
Ahụmịhe onye ọrụ dị ezigbo mkpa maka onye ọrụ: ọ bụrụ na ọ dịghị mma, n'ezie n'ọdịnihu ọ gaghị emeghachi ikpo okwu. Dabere na peeji nke ngosi nke ụdị na-esote, Android 8.0 -aka Gam akporo Oreo— ọ ga-eru ugboro abụọ ngwa ngwa karịa nke ugbu a gam akporo Nougat.
Dabere na ụlọ ọrụ ahụ, onye ọ bụla ga-enwekwu mmiri mmiri ga-egbu usoro. N'ụzọ dị otú a, ha ga-ewepụ ihe nhazi ahụ ma lekwasị anya na ọrụ dị n'ihu ya. Anyị ga-ahụ otu o si eme omume na mobiles dị ugbu a.
Foto dị na foto, 'ngwa' abụọ na ihuenyo ahụ n'otu oge
Es otu n’ime ọrụ ndị a rịọrọ n’obodo. Tụkwasị na nke a, ihe ọhụrụ a na-enye na gam akporo Oreo bụ ihe enwere ike ịmeworị na sistemụ ndị ọzọ maka oge ụfọdụ. Ihe ọzọ bụ na anyị nwere ike ịgwa gị na Samsung etinyelarị nke a na ụdị ya ruo oge ụfọdụ, ọkachasị na ọkwa ya.
Ugbu a, ị ga-enwe ike ime rụọ ọrụ na ngwa abụọ na ihuenyo n'otu oge. Nke a ga-aba uru ma ọ bụrụ na ebufere ya na mbadamba mbadamba, ebe onye ọrụ nwere ike ịlele vidiyo YouTube mgbe ha na-ekepụta oge na kalenda. Ọzọkwa, ọ ka ga-ahụ ma ọ bụrụ na ngwa niile ga-adaba na ihe ọhụrụ a.
Autocomplete na-abịa gam akporo Oreo
Eziokwu bụ na ọnụọgụ nke ngwa ndị anyị na-eji na ọnụ ọgụgụ aha njirimara na okwuntughe nke achọrọ iji ya, oge achọrọ iji jupụta igbe okwu niile dị oke elu. Ugbu a ọ bụrụ na ewepụ usoro a, anyị jisiri ike na-agba ọsọ ọsọ na mbọ anyị.
N'ihi ya, Google echewo banyere akụkụ a ma webata ya onye ama ama - ma tokwaa - autocomplete na sistemụ mkpanaka ya ka ọ na-echeta 'ntinye' anyị ozugbo ma nye anyị ohere ịga ọsọ ọsọ na ọrụ anyị kwa ụbọchị.
Ihe ngosi na ngwa
Dị ka ngwa ngwa ngwa ngwa na-egosi anyị ọtụtụ ọkwa na-echere anyị ozugbo anyị meghere ngwa ahụ, nke a bụ ihe na-echere anyị site ugbu a na gam akporo Oreo na imirikiti mmemme ndị anyị rụnyere na ọnụ anyị.
N'ụzọ dị otú a, a na-emezi njikwa nke ọkwa ndị na-erute anyị ma anyị ga-ama n'oge niile ihe na-echere anyị n'akụkụ a. Ọ bụ karịa, ma ọ bụrụ na anyị na-eme ogologo pịa na akara ngosi ngwa, anyị ga-enweta igbe okwu nke nwere ike ịmekọrịta ozugbo na ọkwa na-abata. Na nkenke: ọzọ anyị na-ezo aka na njikwa nke oge anyị.
Ngwa ngwa gam akporo ngwa - Gbanye nrụnye
Ojiji nke ngwa - na karịa ụlọ ọrụ niile - arụpụtara nke ọma na ọrụ 'Ngwa ngwa ngwa' ọhụrụ. Ma ọ bụ na n'ụzọ dị otú a, chọpụta ngwa ndị ọhụrụ site na ihe nchọgharị ahụ, netwọkụ mmekọrịta ma ọ bụ ngwa izi ozi ngwa ngwa ọ ga-adị mfe karị.
Ihe ọrụ a na-enye anyị ohere bụ wụfuo ihe na-agwụ ike ma nwalee ngwa ngwa nke ọma. Nke ahụ bụ, ị ga - enweta - ma ọ bụ chọta - njikọ nke ngwa, ozugbo ịpịrị ha, ị ga - enwe ike ịme ha.
Emojis ọhụrụ (60 ga-abụ eziokwu)
Anyị na-eji ọtụtụ emojis na mkparịta ụka anyị na kwalite asụsụ ọma. Ọ bụ ya mere na ọtụtụ ihe anyị nwere na akwụkwọ akụkọ anyị, nke ka mma. Yabụ, Google ga-arụ ọrụ yana emezigharịala ụdị emojis ya dị ugbu a. Na mgbakwunye, o tinyela ihe ruru iri isii ọhụrụ ị na-ahụbeghị. Naghị achọ ịmata ihe ha bụ? Anyị na-efu efu mbọ.
More batrị na ndị ọzọ nche na gam akporo Oreo
N'ikpeazụ, Google anaghị echefu nchedo na nnwere onwe nke njedebe. Yabụ itinyela usoro nchebe data ọhụụ ejiri Google Protect. Nke a Ọ ga-bụghị nanị na-elekọta nke na-eji onye ọrụ ozi mma. Ọ ga-ahụkwa maka inyocha ngwa ọ bụla anyị rụnyere na ọnụ anyị.
Ka ọ dị ugbu a, na ụdị ọ bụla nke sistemụ arụmọrụ, Google gbalịrị ibelata ike oriri. Na gam akporo 8.0 agaghị adị obere. Yabụ, naanị site na 'igbu' ngwa ndị dị na ndabere ga-enweta nnwere onwe.
Ngwa ngwa site na ụdị a
Dị ka ọ na-eme mgbe nile, kọmputa ndị mbụ a na-atụ anya inweta ụdị ọhụrụ a bụ mobiles ndị Google rere site na ụlọ ahịa ya. Agbanyeghị, na njedebe nke afọ, ụlọ ọrụ ndị ọzọ ga-esonye. Anyị na-ekwu maka ya Samsung, Huawei, LG ma ọ bụ Nokia ọhụrụ ahụ. Ma ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ ewepụtala koodu isi iji mee ka mmelite dị ngwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Gam akporo Oreo: a kwadoro aha ya na ndị a bụ isi akụkọ ya
Nke a bụ ihe 4K na-adọkpụ na-ekwupụta Final Fantasy XV maka PC
HTC na-ebelata ọnụahịa nke iko eziokwu ya mebere HTC Vive